सातामा डेढ अर्बभन्दा बढीको कारोबार - Naya Patrika
सातामा डेढ अर्बभन्दा बढीको कारोबार
गत साता नेप्से परिसूचक २० दशमलव ४९ अंक घटेको छ । नेप्से ओरालो लागे पनि अघिल्लो साताको तुलनामा कारोबार रकम भने बढेको छ । अघिल्लो साता चार कारोबार दिनका लागि मात्र बजार खुला रहेको र गत साता पाँचै कारोबार दिन बजार खुला रहेको कारण कारोबार रकम बढेको हो । पाँच कारोबार दिनका लागि खुला राखेको बजारमा चार कारोबार दिन नेप्से घटेको थियो भने एक कारोबार दिन मात्र बजार बढेको थियो । गत साता पनि बजार सुस्त देखिएको थियो ।
बजार सुस्त हुँदा लगानीकर्ताले लगानीको रणनीति बनाउन सकेका छैनन् । बजारमा सेयर आपूर्ति बढेका कारण कारोबार रकम प्रभावित भएको छ । यसले बजारलाई निश्चित दिशा दिन सकेको छैन । चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि जारी भएको हकप्रद, बोनस तथा एफपिओले बजारमा सेयर आपूर्ति बढाएको छ । बजार विस्तार नभएका कारण आपूर्तिअनुसारको माग सिर्जना हुन सकेको छैन । साथै धितोपत्र बजार राजधानीकेन्द्रित भएका कारण पनि बजारमा माग सिर्जना नभएको हो । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्से प्रदान गर्ने, अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने र ब्रोकरहरू राजधानीबाहिर जानेलगायतका कार्यहरू भए बजामा माग बढ्नेछ । त्यसपछि मात्र बजारले सकारात्मक दिशा पाउन सक्ने एक लगानीकर्ताले बताए । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई गत साताको अन्तिम कारोबार दिन ३७ दशमलव ५३ स्केलमा रहेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिद–बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्छ ।
गत साता १ सय ७७ कम्पनीको १८ हजार १ सय ५३ पटकको कारोबारमा १ अर्ब ५५ करोड ११ लाख २ हजार रुपैयाँबराबरको ४१ लाख ९६ हजार ४ सय ९० कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । अघिल्लो साता १ सय ७२ कम्पनीको १६ हजार ७ सय ६९ पटकको कारोबारमा १ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ९१ हजार रुपैयाँबराबरको ३४ लाख ७३ हजार २० कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको थियो । अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन १ हजार ४ सय ११ दशमलव ५२ बिन्दुमा बन्द भएको बजार गत साताको अन्तिम कारोबार दिन १ हजार ३ सय ९१ दशमलव शून्य ३ बिन्दुमा बन्द भएको छ । परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १९ दशमलव ४८ अंक घटेको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा ३ दशमलव ९४ अंक घटेर २ सय ९४ बिन्दुमा पुगेको छ ।
गत साता ६ कम्पनीले कुल १ करोड ९७ लाख ५९ हजार ४ सय ९ कित्ता सेयर सूचीकृत गरेका छन् । सो साता बैंक अफ काठमाडौंले ६१ लाख ५ हजार ६७ कित्ता एफपिओ र आरएसडिसी लघुवित्तले २३ लाख कित्ता हकप्रद सूचीकृत गरेको छ । त्यसैगरी, छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १६ लाख ५९ हजार २ सय ९३ कित्ता, आइसिएफसी ८ लाख ३ हजार ८ सय ८५ कित्ता, सोल्टी होटेलले ८६ लाख ८८ हजार २ सय ४४ कित्ता र स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ लाख ५० हजार कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत गरेका छन् ।
गत साता कारोबारमा आएको सबै समूहको परिसूचक घटेको छ । सो साता बिमा समूहको परिसूचक १ सय २५ दशमलव १ अंक, जलविद्युत् समूहको ३७ दशमलव ३६ अंक, लघुवित्त समूहको ३३ दशमलव ३९ अंक, होटेल समूहको १९ दशमलव ५७ अंक, उत्पादनमूलक समूहको १७ दशमलव ४६ अंक र वाणिज्य बैंक समूहको १७ दशमलव शून्य ७ अंक घटेको छ । त्यसैगरी, विकास बैंक समूहको परिसूचक १६ दशमलव ४२ अंक, अन्य समूहको ४ दशमलव ८२ अंक, वित्त समूहको २ दशमलव ९७ अंक र व्यापार समूहको २ दशमलव ७९ अंक घटेको छ ।
गत साता कारोबार रकम र कारोबार भएको सेयर संख्याका आधारमा नेपाल बैंक लिमिटेड अगाडि रहेको छ । गत साता सो वाणिज्य बैंकको १६ करोड ४७ लाख १० हजार रुपैयाँबराबरको ४ लाख ६१ हजार कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । कारोबार संख्याका आधारमा भने कुमारी बैंकको ४ सय ३ पटकको कारोबार भएको थियो ।
बुटवल पावरले थप्यो एफपिओको म्याद
बुटवल पावर कम्पनीले थप निष्कासन (एफपिओ)मा आवेदन दिने म्याद थप गरेको छ । कम्पनीले मागअनुसारको आवेदन नपरेपछि संस्थागत लगानीकर्ताले पनि सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरी म्याद थप गरेको हो । कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलले सबै सेयर बिक्री नभएकाले संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर दिने उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँबराबरको एफपिओ जारी गरेकामा अझै ८० करोड रुपैयाँबराबरको एफपिओ बिक्री नभएको बताएको छ । कम्पनीले माघ १५ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपिओ बिक्री खुला गरेको थियो । कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. १ सय अंकित मूल्यमा रु. ४ सय १ प्रिमियम मूल्य थप गरी प्रति कित्ता रु ५ सय १ मा एफपिओ जारी गरेको हो । कम्पनीले साधारण सेयर (आइपिओ) बिक्री नगरी एफपिओ बिक्री गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुटवल पावर कम्पनीको एफपिओ कानुनसम्मत नै रहेको जनाएको थियो । हालसम्म निष्कासित सबै धितोपत्र खरिदका लागि आवेदन पर्न नआएकाले ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४’ अनुसार आजदेखि संगठिन संस्था वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका संस्थाले समेत सेयर खरिद गर्न पाउने गरी बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । माघ २४ गतेसम्ममा जम्मा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँराबरको मात्रै एफपिओ बिक्री भएको कम्पनीले बताएको छ ।
उन्नति माइक्रो फाइनान्सको सेयर बाँडफाँड
उन्नति माइक्रो फाइनान्सले माघ २६ गते साधारण सेयर (आइपिओ) बाँडफाँड गरेको छ । कम्पनीले आवेदन दिएका सेयरधनीमध्ये १५ हजार १५ आवेदकहरूलाई न्यूनतम १० कित्ता सेयर बाँडफाँड गरिएको हो । कम्पनीले १ लाख ६५ हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको थियो । सोमध्ये ८ हजार २ सय ५० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोष र ६ हजार ६ सय कित्ता कर्मचारीलाई छुट्याएको थियो । आवेदन दिएका २ लाख ४६ हजार ८ सय ९४ जनामध्ये २ हजार ४ सय ६७ आवेदन कम्पनीले बताएको छ । सेयर आवेदनमा प्रस्ट नभएको र हितग्राही खाता नम्बर स्पष्ट नभएका आवेदकको समेत आवेदन रद्द गरिएको हो ।